Xildhibaano Buuq ka Dhaliyay Golaha Shacabka Maanta – WARSOOR
MUQDISHO – (WARSOOR) – Xildhibaannada lagusoo doortay magaalada Garbahaareey ee gobolka Gedo ayaa maanta buuq ka dhex abuuray xarunta golaha shacabka, halkaasi oo uu ka furmay kulankii ugu horreeyay ee barlamaanka kadib doorashadii guddoonka cusub.
Xildhibaannada Garbahaareey ayaa sheegay inay yihiin xildhibaanno ku yimid waddo saxan oo waafaqsan heshiiskii doorasho ee 17 september oo ay wada saxiixdeen golaha wadatashiga qaran.
Waxay sheegeen inay doonayaan inay helaan xuquuq lamid ah midda ay ku fadhiyaan xildhibaannada kale. Waxay sidoo kale weerar afka ah ku qaadeen xildhibaannada lagu soo doortay Ceelwaaq, iyagoo ku tilmaamay inay yihiin saraakiil ay Kenya soo qoratay.
Xildhibannadan waxa ay saameyn ku yeeshay howlihii maanta horyaallay barlamaanka cusub, oo ahayd inay xilalka la wareegaan guddoonka cusub ee barlamaanka.
Waxay sheegeen inaysan xarunta barlamaanka ka bixidoonin, illaa ay ka xaqiijinayaan inay si rasmi ah uga mid noqdaan barlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Arrintaan ayaa kusoo beegantay, iyadoo isla xarunta golaha barlamaanka ay ku sugan yihiin xildhibaannada lagusoo doortay magaalada Ceelwaaq, welise arrintooda go’aan lagama gaarin.